नगरपालिकाबाटै सेवा लिन सकस – Newssarokar
न्यूज सरोकार । २८ भाद्र २०७८, सोमबार १८:०९
सुर्खेत । भेरीगंगा नगरपालिका–५ बबइकी रत्ना बिक छोरीको जन्मदर्ता गर्न एक सातायता दैनिकजसो वडा कार्यालय धाइरहेकी छन् । छोरीको जन्मदर्ता प्रमाण–पत्र हराएपछि पुनः बनाउन ६ दिनदेखि वडा कार्यालय आइरहेकी उनको काम बनेको छैन । आइतवार नगरपालिकाको कार्यालयमा भेटिएकी रत्नाले जन्मदर्ताको काम लिएर वडामा जाँदा कर्मचारी नै नभेटिने गरेको बताइन् । वडामा सचिव र अध्यक्ष दुवै नभेटिएपछि उनी नगरपालिकामा आएकी हुन् । त्यहाँ पनि सचिव र अध्यक्ष भेटिनन् । आइतवार बिहान १० बजे नगरपालिकाको कार्यालय पुगेकी रत्नाले त्यहाँ अन्य कर्मचारी पनि देखिनन् ।
‘वडामा काम नभएपछि यहाँ आएँ । जुन फाँटमा हेरे पनि कर्मचारी छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘६ दिनदेखि धाउँदा पनि एउटा सामान्य सेवा लिन सकिएन ।’ वडा कार्यालयमा जाँदा सचिवहरू नगरपालिकातिरै हुन्छन् भन्ने जवाफ पाएकी रत्नाले नगरपालिकामा आउँदा समेत निराश हुनुपरेको सुनाइन् ।
उनी दिउँसो १ बजेसम्म नगरपालिका परिषरमा कर्मचारी भेटिन्छन् कि भनेरै पर्खिरहेकी थिइन् । एक सय ५० रूपैयाँ गाडि भाडा तिरेर रत्ना नगरपालिका आएकी हुन् । तर, उनको काम आइतवार पनि भएन । नगरपालिकामै आउँदा पनि छोरीको जन्मदर्ताका लागि कर्मचारी नभेटेपछि पालिकाबाट सेवा लिनै मुस्किल हुने गरेको उनको गुनासो छ ।
रत्ना मात्रै होइन करिब डेढ घण्टा हिँडेर नगरपालिकामा सेवा लिन आएका भेरीगंगा–४ मुर्गीखेतका विकास खत्रीले पनि सेवा लिन खुबै सास्ती झेल्नुप¥यो । सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी कार्यकक्षमा नभेटिएपछि आइतवार पनि उनको काम भएन । तीन दिनदेखि उनी भेरीगंगाको कार्यालय आइरहेका छन् । आइतवार पनि काम बन्ने छाँट नदेखेपछि आक्रोशित उनले नगरप्रमुख भुपेन्द्र चन्दको कार्यकक्षमा पुगेर गुनासो पोखे ।
खत्रीले नगरप्रमुख चन्दलाई भने, ‘मेयरसाब यो के ताल हो ? कर्मचारी खोइ ? हामी सर्वसाधारणलाई सामान्य सेवा लिन पनि किन यति सास्ती ?’ नगरप्रमुखबाट एक छिनमा काम हुने आश्वासन पाएपछि उनले केहिबेर कुरे । नगर प्रमुखले समन्वयको प्रयास गरेपनि फाँटवाला कर्मचारी आएनन् । उनको काम भएन ।
आइतवार सुन्दर नेपाल संस्थाको पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत गठन गरिएको निगरानी समूहले भेरीगंगा नगरपालिकाको कार्यालयमा अनुगमन गरेको थियो । उक्त निगरानीका क्रममा अधिकांश फाँटका कर्मचारी अनुपस्थित रहेको पाइएको हो । अनुगमनका क्रममा कर्मचारीको लापरबाहीले सेवाग्राहीलाई हैरानी हुने गरेको भेटियो,’ निगरानी समूहका एक सदस्यले भने, ‘नगरमा सेवाग्राहीमैत्री वातावरण देखिएन ।’
नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत र प्रशासनका धेरैजसो कर्मचारी दिउँसो १ बजेसम्म कार्यालयमा उपस्थित थिएनन् । तर, सेवा लिन आएका सर्वसाधारणको भिड भने बाक्लै देखिन्थ्यो । नगरका एक जना वडाध्यक्षले नाम नखुलाउने सर्तमा नगरप्रमुख र उपप्रमुखको समझदारीका कारण कर्मचारीहरूले पनि जिम्मेवार भएर काम नगर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘कर्मचारीहरूमा जनप्रतिनिधिप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । यहाँ कर्मचारीले मन लगाएर काम गर्ने वातावरण छैन ।’ उनले नगरपालिकाको आन्तरिक कलहले सेवाग्राही मर्कामा परिरहेको दाबी गरे ।
उपप्रमुख रेणु आचार्यले आफू बिहान १० बजे नै कार्यालय आँउदा समेत अधिकांश कर्मचारी नआएको बताइन् । ‘समयमै कार्यालय नआउने समस्या छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कर्मचारी जिम्मेवार नबनिदिँदा सेवा प्रवाहमा चुनौती बढेको छ । सेवाग्राहीले कामको प्रक्रियाबारे नबुझ्दा समेत दुःख पाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
हुम्लाकाे खार्पुनाथ गाउँपालिकामा भालुको आक्रमण
हुम्ला । हुम्लामा बाली लगाएको जग्गामा काम गरिरहेकी महिलालाई भालुले आक्रमण गरेको छ । खार्पुनाथ गाउँपालिका–४ छिप्रा गाउँकी महिलालाई कोदो लगाएको खेतमा भालुले आक्रमण गर्दा घाइते भएकी हुन् । छिप्रा गाउँकी ३६ वर्षकी असली उपाध्यायलाई जग्गामा एकलै काम गरिरहेको बेला भालुले आक्रमण गरेर घाइते बनाएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण बहादुर […]